Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Welsh Daniel James Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha ya “Dan”. Nwa akwukwo Daniel James nke di na akwukwo ihe omuma nke bu ihe omuma banyere ihe omuma ihe site na nwata rue oge.
Ee, onye ọ bụla kiriri bọọlụ n'asọmpi Bekee nke 2018/2019 n'oge a ga -amata onye bụ Daniel James n'ezie.
Ọ bụ ndị na -eto eto dị ịtụnanya dị ka nwata ahụ Michael Owen mara maka ijeụkwụ ya na aghụghọ ya nke mere ka Manchester United na -arịọ ikpere ha.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị aka ole na ole ndị egwuregwu bọọlụ maara ọtụtụ ihe gbasara Daniel James Biography nke na -atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Akụkọ nwata Daniel James - Ndụ mbido na azụ ezinụlọ:
Malite, aha ya bụ Daniel Owen James. Cheta na: O nweghị njikọ ezinụlọ ọ bụla Michael Owen.
Daniel James dị ka a na -akpọkarị ya mụrụ na 10th ụbọchị Nọvemba 1997 nye ndị mụrụ ya na Beverley, United Kingdom.
Ebe amụrụ Dan Beverley bụ obodo mpaghara ahịa akụkọ ihe mere eme nke Yorkshire, na nso Hull City, England.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị egwu na -ahụ ya dị ka onye nwere ezigbo ezinụlọ Welsh ikekwe n'ihi nkwado ya na ndị otu Welsh National.
Agbanyeghị, ezinụlọ ya niile esighị na Wales. Ụfọdụ ndị ezinaụlọ si England ebe ndị ọzọ sitere na Welsh.
Ị maara?… Daniel kpebiri ịkwado Wales site n'aka nna ya nke a mụrụ na Aberdare, obodo dị na mpaghara Cynon Valley nke Rhondda Cynon Taf, South Wales.
Daniel James Mmụta na Nrụpụta Ọrụ:
N'ịbụ onye na-etolite, Daniel gara School South Hunsley na Ụlọ akwụkwọ nke isii. Ọ bụ nnukwu ụlọ akwụkwọ dị na Melton, Yorkshire, England, otu nke a rụpụtara aha maka ịzụlite ụmụaka na-eme egwuregwu.
N'ikwu okwu banyere egwuregwu, nne na nna Daniel James kwetara ka nwa ha nwoke mezie ọmụmụ ya na egwuregwu ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ ya nyere ya ohere igwu egwu n'egwuregwu asọmpi na oge egwuregwu.
Daniel James Career Buildup Akụkọ. Ebe E Si Nweta Welton Primary School.
Ebufere egwuregwu Daniel n'ime bọọlụ nke ọ bụghị naanị na -egwu n'ụlọ akwụkwọ kamakwa na mpaghara Beverly.
Ọ gara n'ihu ruo mgbe ọ gbara afọ 9, afọ njem maka ọdịnihu ya malitere.
Daniel James Biography - Ndụ Ndụ Mbụ:
Ọchịchọ Daniel nwere maka bọl jidere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Hull City bụ onye nakweere ya na 2006 n'oge ọ dị afọ itoolu.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ụmụaka na-eto eto nke ukwuu na agụmakwụkwọ, Daniel nwere ike rụọ ọrụ n'ụzọ gafere ogo afọ.
Ọ weghị ya ogologo oge iji nwee mmetụta na klọb ahụ. Mgbe ọ bụ nwata, ọ kwadoro Manchester United na onye ọkpụkpọ kachasị amasị ya bụ Ryan Giggs.
Daniel James Bio - Okporo Ụzọ Ebube Akụkọ:
N'agbanyeghị na ndị Tigers na-eto eto afọ asatọ, mgbanwe gbanwere mgbe winger kpebiri na ịkwaga South Wales ga-abụ nhọrọ kacha mma maka ọrụ nwata. Swansea ghọrọ ụlọ nke abụọ maka James n'ihi ekele ezinụlọ ya.
Mgbe ọ nọ na Wales, ndị otu Welsh U16 kpọrọ Daniel James. N'afọ mbụ ya, o duuru ndị otu ahụ merie 2013 Victory Shield.
Daniel James Biography - Bilie na Akụkọ Ama:
Ọzọ, James rụrụ ọrụ dị mkpa maka ndị òtù Swansea nke meriri nchịkọta akụkọ ha n'okpuru akụkọ 23s ma kpoo okpukpu abụọ. Egwuregwu ahụ na-eme ihe mgbaru ọsọ itoolu n'ime mgbasa ozi ahụ dum.
Ije Iche Iche:
Mgbe ị na-ekiri Daniel James na pitch, ihe mbụ ị ga-ahụ bụ usoro egwu ya. O meela otu mgbe na 36kph, nke fọrọ nke nta ka ọ dị Arjen Robben si ijeụkwụ ụwa.
Igwe kpakpando Welsh na -adị oke ọsọ ọsọ ma na -achị ọchị n'ọsọ ya dị ka a hụrụ na vidiyo dị n'okpuru.
Ka ọ dị ugbu a n'oge ederede, ọsọ ọsọ na aghụghọ nke Dan hụrụ ya ka a na-enyocha ya site na ọtụtụ klọb Premier League kacha mma, nke kacha mma n'ime ha bụ Manchester United.
Ọ bụ naanị obere oge tupu ọ sị Swansea nke ọma. Ndị ọzọ, dị ka ha na -ekwu, bụ akụkọ ugbu a.
Ọnye na -bụ Ria Hughes? Nwunye Daniel James:
Site na mbili Daniel James, ama ajuju onye obula bu;…Ọnye bụ enyi nwanyị Daniel James, nwunye, ma ọ bụ WAG?.
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ bụ na ọsọ ọsọ na aghụghọ nke James agaghị eme ka ọ bụrụ osisi vaịn na-ahụ n'anya nye ụmụ nwanyị. N'azụ onye egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị mara mma na onye mara mma nke Ria Hughes.
Daniel James Nwanyị.
Ria Hughes bụ onye na-adịghị achọ ọdịmma onwe ya nanị nke na-adịghị eme ihe ọ bụla karịa inye nkwado maka obi ya. Ndị enyi abụọ ahụ kpebiri ijikọ alụmdi na nwunye Knott na Disemba 2017.
Isi ihe pụtara emume a bụ oge nwa nwoke na-ahụ n'anya Dan nyere nsusu ọnụ ya dị elu.
Kemgbe alụmdi na nwunye ha, Daniel na Ria ka bụ otu n'ime ndị kachasị nwee mmekọrịta nke Swansea Football Club.
Daniel James Ndụ nkeonwe:
Ịmata ndụ Daniel James ga -enyere gị aka ị nweta nkọwa zuru oke banyere ya. Malite, a maara Daniel maka agwa ọ joụ.
Ọ bụ onye nwere ike ịmụmụ ọnụ ọchị ụbọchị niile ma nwee ike ime mgbanwe n'ụzọ dị mfe na akparamagwa mmadụ dị iche iche.
Ị maara?… Daniel James nwere mmasị ịga njem na US ma ọ bụ onye dị ike Barack Obama. N'okpuru ebe a bụ foto nke ọ na-eleta White House.
Daniel James Family Life:
Ndị nne na nna Daniel James nọ ya na -aghọrọ uru dị n'ịkụnye nwa ha nwoke echiche siri ike.
Ugbu a ka anyị na -ede, ọ dị ntakịrị ihe amaara banyere nne ya ma ọ bụ nna ya n'ihi na Daniel ka na -amalite ịbụ onye ama ama.
Banyere nwanne ya: Daniel James etoliteghi na nne na nna ya. O nwere nwanne nwoke okenye nke na-akpọ Alex James.
Ọtụtụ ndị mmadụ na -eche na nnukwu ihe jikọtara ndụ nke nnukwu ụlọ obibi, ụgbọ ala okomoko, na ihe ịrịba ama ndị ọzọ nke akụ na ụba.
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe gbasara Daniel James onye ya na nwunye ya na -ebi ndụ na -enye ume ọhụrụ n'agbanyeghị na ọ bara uru na £ 15 nde.
Daniel James Eziokwu Eziokwu:
Daniel James si na otu ụzọ nke Swansea si Liberty Stadium gbaghaa n'akụkụ nke ọzọ n'ihe dịka sekọnd 7. Lelee vidiyo n'okpuru. Ebe E Si Nweta BTSport.
Nke abuo, afọ a (1997) a mụrụ Daniel James nwere ihe ndị a na-echetara echefu;
(i) Akụkọ akụkọ ifo akụkọ Titanic (nke Kate Winslet sere Leonardo Di Caprio) meghere na 1997 wee ghọọ nnukwu mkpokọta Igbe-Office ọ bụla na akụkọ ihe nkiri.
(ii) N'afọ ahụ 1997 hụkwara Harry Potter na Nkume Ihe Ọmụma.
(iii) Adiaha Diana onye amara maka amara ya na ala ala ya gburu gburu ugbua ụgbọ ala n'afọ 1997.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ akụkọ nwata anyị nke Daniel James gbakwunyere Eziokwu Untold Biography.